Ka Diwaangeli hada SPS - Seattle Public Schools
Seattle Public Schools/District News/Ka Diwaangeli hada SPS
Ka Diwaangeli hada SPS
Posted: March 4, 2022 | Updated: June 14, 2022
Summary: lmahaagu 5 sano ma noqon donaa August 31? Markan waa waqtigii lagu qori lahaa Kindergarten Dugsiyada Dadweynaha Seattle.
Ilmahaagu 5 sano ma noqon donaa August 31? Markan waa waqtigii lagu qori lahaa Kindergarten Dugsiyada Dadweynaha Seattle.
Adiga iyo qoyskada ma degen tihiin Siyaatal Waashinton? Sida soo socota ayaad caruurtada Skuullada ugu qori kartaa Sannad Skuulleedkan 2021-22 ama waxaad soo soo diri kartaa faxkiskaan (qoritaanka sannad skuulleedka soo socda 2022-23 ee bilaabanaya Bisha Janaayo 3 deeda 2022)
Dugsiyada Dadweynaha Seattle waxay leedahay dugsiyo badan oo kaqeyb galayaal ah oo laga dooran karo dugsiga iyo dugsiga doorashada si loo haqabtiro baahida gaarka ah ee arday kasta. Marka la diwaangeliyo goor hore, ardayda kindergarten waxay helaan fursado iyo dugsiga ay codsadaan aan ka ahayn dugsiga ku qoran inta lagu guda jiro xiliga diwaangelinta furan.
Diwaangelinta ardayda cusub waxay bilaabaneysaa sanad dugsiyeedka 2022-2023. Diwaangelinta oo dhan waxaa lagu dhameystirayaa Khadka onleenka.
Waxaanu kugu caawin karaka xarunta John Stanford Center (JSC), 2445 3rd Ave S 8:30 a.m. ilaa 4:00 p.m., Isniin – Jimce. Spanish, Chinese, Vietnamese, Amharic, Oromo, iyo Somali waxaa kuu diyaar ah caawiye ku hadlayo luqadaada JSC.
Waxaad halkaan ka heli kartaa Dugsiga diwaankaaga ee nawaaxigaaga
Ma dooneysaa inaad waxbadan ka barato isdiiwaangelinta iyo xiliga diwaangelinta furantahay.
Enrollment Kindergarten School Year Dates
Hadafkeenu waa in xanaanooyinka cu SPS ay dareemaan amaan, taageero iyo diyaar u ah inay wax bartaan. …
Xogtii Ugu Dambeysey ee Maalinta Ugu Danbaysa Dugsiga ee Dugsiyada Qaarkood
Dhawr dugsi oo SPS ah ayaa u baahday maalmo dib u habeyn ah sanadkan sababtoo ah xiritaanka Janaayo 2022.
Taariikhaha muhiimka ah ee 2022-23
Malmaha Sanad Dugsiyeedka 2022-23…